Nhau - Maitiro ekusiyanisa "girazi" - mutsauko pakati pezvakanaka zvegirazi rakamisikidzwa uye girazi rinovhara
Chii chinonzi insulating girazi?
Inodzivirira girazi rakagadzirwa nemaAmerican muna 1865. Iyo mhando nyowani yezvivakwa zvine kupisa kwakanaka kwekudzivirira, kuputira inzwi, aesthetics uye kushanda, izvo zvinogona kudzikisira huremu hwezvivakwa. Inoshandisa zvidimbu zviviri (kana zvitatu) zvegirazi pakati pegirazi. Yakashongedzerwa nehunyoro-hunotora desiccant yekuona yakareba-yakaoma yakaoma mhepo nhete mukati megomba gomba, isina hunyoro uye guruva. Tora yakasimba-yakasimba, yepamusoro-yemhepo-yakasungwa yakakomberedzwa glue kuti ubatanidze ndiro yegirazi uye iyo aluminium alloy furemu yekuita yakakwira-inoshanda isina girazi risinganzwe.
Chii chinonzi laminated girazi?
Laminated girazi inonzi zvakare laminated girazi. Zvidimbu zviviri kana zvinoverengeka zvegirazi rinoyangarara zvakagadzirwa neyakaomarara PVB (ethylene polymer butyrate) firimu, iyo inopisa uye inomanikidzwa kupedza mweya zvakanyanya sezvinobvira, wozoisa muotoclave uye shandisa tembiricha yakakwira uye yakasimba kumanikidza kubvisa shoma shoma remhepo yakasara. Mufirimu. Inofananidzwa neimwe girazi, ine anti-vibration, anti-kuba, bullet-proof uye kuputika-proof zvivakwa.
Saka, ndeipi yandinofanira kusarudza pakati pegirazi rakaomeswa uye girazi rinovhara?
Chekutanga pane zvese, girazi rakamisikidzwa uye girazi rinovhara mweya zvine mhedzisiro yekudzivirira inzwi uye kupisa kupisa kune imwe nhanho. Nekudaro, girazi rakamisikidzwa rine rakajeka kuvhunduka kuramba uye kuputika-humbowo zvivakwa, nepo ichidzivirira girazi ine zvirinani kupisa kwemafuta.
Panyaya yekudzivirira inzwi, pane misiyano yakasiyana pakati pezviviri. Laminated girazi rine yakanaka seismic performance, saka kana mhepo yakasimba, mukana wekuzvidzora-kudedera ruzha ishoma kwazvo, kunyanya mune yakaderera frequency. Hollow girazi rinowanzoitirwa resonance.
Nekudaro, inodzivirira girazi ine mukana zvishoma mukuparadzanisa ruzha rwekunze. Naizvozvo, maererano nenzvimbo dzakasiyana, girazi rinofanira kusarudzwa rakasiyana zvakare.
Inodzivirira girazi ichiri yakakosha!
Insulating girazi ndiyo yakajairwa girazi chikamu cheSuifu madhoo nemahwindo. Insulating girazi inoumbwa maviri (kana matatu) zvidimbu zvegirazi. Iwo magirazi zvidimbu zvakasungirirwa kune iyo aluminium alloy furemu ine desiccant nekushandisa yakakwira-simba, yakakwira-isina mweya inoumbwa neglue kuburitsa inoshanda kurira kwekudzivirira uye kupisa kupisa. Kuchengetedza uswa.
Iyo yekudziya conductivity yekuvhara mweya denderedzwa yekudzivirira girazi yakadzika kwazvo kupfuura yechinyakare. Naizvozvo, tichienzanisa nechidimbu chimwe chegirazi, iko kuputira mashandiro egirazi inokwenenzverwa kunogona kupetwa kaviri: muzhizha, girazi rinodzivirira rinogona kuvhara 70% yezuva remagetsi ezuva, richidzivirira mumba. Kupisa kwepamusoro kunogona kuderedza kushandiswa kwesimba kwemhepo inogadzirisa; munguva yechando, inodzivirira girazi inogona kunyatso kumisa kurasikirwa kwekupisa kwemukati uye kudzikisa kupisa kurasikirwa mwero ne40%.
2. Kuchengetedzwa kwekuchengeteka
Zvigadzirwa zvegirazi zvinodzikamiswa pakudziya kunogara kuripo kwemadhigirii makumi manomwe neshanu kuona kuti pamusoro pegirazi rakaenzana kupisa; musiyano wekupisa unogona kumira inguva nhatu pane yegirazi rakajairika, uye simba rekukanganisa iri ka5 iro regirazi rakajairika. Kana girazi rakadzikama rakakanganiswa, rinozoshanduka kuita zvidimbu zvakaumbwa sebhinzi (butuse-angled), izvo zvisiri nyore kukuvadza vanhu, uye ruzivo rwekuchengetedzwa kwemikova nemahwindo rwakachengeteka.
3. Kuchengetedza inzwi uye kudzikisira ruzha
Iyo isina kubvaruka musuwo uye girazi rewindo rakazadzwa neinert gasi-argon. Mushure mekuzadzwa neArgon, iyo yekudzivirira kuputira uye kudzikisira ruzha mhedzisiro yemasuwo nemahwindo inogona kusvika 60%. Panguva imwecheteyo, nekuda kwekudzikisira kwemafuta ekudziya gasi rakaomarara, iyo yekumhanyisa mashandiro egomba reargon gasi rakazadza dura rakakwirira zvakanyanya kupfuura iro remasuo akajairika nemahwindo.
Zvekushandisa zvemumba zvakajairika, inoisa girazi ndiyo sarudzo yakanyanya kushandiswa. Kana iwe uchigara munzvimbo inokwira-kumusoro, uko kune simba mhepo uye ruzha rwekunze rwakadzikira, girazi rakaminama zvakare sarudzo yakanaka.
Kuratidzwa kwakanyanya kweaya maviri marudzi egirazi ndiko kushandiswa kweye sun room. Pamusoro pemba yezuva kazhinji inoshandisa girazi rakadzvanywa rakapetwa kaviri girazi. Iyo yegirazi girazi remukati mezuva rinoshandisa inodzivirira girazi.
Nekuti kana ukasangana nezvinhu zvinowira kubva kumusoro kwakakwirira, kuchengetedzwa kwegirazi rakavezwa rakakwirira, uye hazvisi nyore kuputswa zvachose. Iko kushandiswa kwekuputira girazi kune iyo yegirazi girazi kunogona zvirinani kuzadzisa kupisa kupisa maitiro, ichiita iro zuva nzvimbo inodziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha. Naizvozvo, hazvigone kutaurwa kuti ndeipi mbiri-yakasungirirwa girazi rakaomeswa kana yakapetwa kaviri girazi inodzivirira iri nani, asi inogona chete kutaura kuti ndechipi chinhu chine kudiwa kukuru.